Mareykanka oo ka hadlay Duqeyn lagu dilay Masuul katirsanaa Shirkada Hormuud | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Mareykanka oo ka hadlay Duqeyn lagu dilay Masuul katirsanaa Shirkada Hormuud
Mareykanka oo ka hadlay Duqeyn lagu dilay Masuul katirsanaa Shirkada Hormuud
Dowlada Mareykanka ayaa sheegtay in baaritaan lagu sameenayo wararka sheegaya in duqeyn ay diyaaradahooda ka fuliyeen degmada Jilib lagu dilay Madaxii shirkada Isgaarsiina Hormuud ee degmadaasi.
Sarkaal sare oo ka tirsan howlgalka Mareykanka Afrika AFRICOM ayaa sheegay in duqeyntii shalay diyaaradahooda ka fuliyeen degmada Jilib uu ahaa mid ay isla ogaayeen dowlada federaalka sidoo kale laga baaraan degay.
Waxa uu sheegay sargaalkan in duqeyntan lala beegsaday xubin katirsan Al Shabaab oo bartilmaameed ahaa, waxa uuna ka gaabsaday sargalakan Mareykanka shaacinta magaca xubinta Al Shabaab katirsan ay beegsadeen.
Sargaalkan katirsan Howlgalka Mareykanka ee Africom ayaa sheegay in baaritaan ku sameyn doonaan warka sheegaya in qofka lagu dilay duqeynta uu katirsanaa maamulka Hormuud, waxa uuna cadeeyay in ay soo bandhigi doonaan natiijada baaritaankooda.
Maamulka Shirkadda Isgaarsiinta Hormuud Telecom ayaa xaqiijiyay in duqeyn diyaaradaha dagaalka Mareykanka ka fuliyeen shalay degmada Jilib lagu dilay Maxamuud Xaaji Salaad oo Madax ka ahaa xarunta Hormuud ee degmada Jilib.
Previous articleMaxaa ka cusub dhuusamareeb (Xog)
Next articleMaxaa ka jira Qoor Qoor uu damacsanyhy in Afgambi kula wareego Dhuusmareeb & guud ahaan Galmudug